Next Article Ụgbọ Olympics Aghaala Naijiria
Masoabi Nkoto buru ụzọ jee chọọ okwu oge o nyere goolu mbụ nke ndị Lesotho na nkeji iri na otu. Nke a kpọtere Ugo Naijiria n'ụra ha jiri were iwe kụziwere Lesotho egwu ọkpa. Oche goolu mba Lesotho chere adọba agbaa William Ekong site na yadi iri abụọ na anọ tupu Alex Iwobi asaa goolu ndị Lesotho buru nye na nkeji iri abụọ na isii.
Na nkeji iri atọ na isii, Chukwueze maliri elu n'etiti ọgba n'azụ abụọ ndi dịka Ugo were isi manye goolu abụọ nke ndị Naịjirịa site na bọọlụ nke Osimhen gbara ya.
N'agba nke abụọ, Osimhen nyere goolu nke atọ na nkeji nke iri asaa na anọ dịka ọgba n'azụ Ola Aina gbara ya bọọlụ na nkeji nke iri asaa na anọ. Dịka ike ka na-arụ ha afọ, Ahmed Musa, onyeisi otu egwu bọọlụ Naijiria gbafuru ezigbo ohere Victor Osimhen nyere ya na nkeji nke iri asatọ.
Nwaamadị na-agbara ndị Lille nke France n'ihu mezuru goolu Naijiria anọ site na ọmarịcha bọọlụ Ramon Azeez ewebatara ewebata gbara ya nke o jiri gbaka netị na nkeji iri asatọ na anọ.
Chidozie Awaziem nyere goolu onwe mere ya bụ asọmpi jiri bie na ọkpụ goolu anọ asatara nanị abụọ ebe mmiri Agụiyi Lesotho riri ya.
Site na mmeri a, bụ nke abụọ na Ntozu Iko Mba Afrịka, Naijiria enwetala aka isii na goolu isii mere ha jiri bụrụ ndị nke mbụ na otu L, site na asọmpi abụọ ha gbara.